Daa’uuska Afrika- Safarkaygii Dheeraa! Q7aad | ASKAR'S BLOG
Abdikadir Askar / October 25, 2016
Markii aan yaraa, waxa aan jeclaa daawashadda filimaanta Hindida ee lagu turjumo Xamar. Filin kasta oo aan daawado, kama aan waayi jirin qof dhintay, oo xaabo lagu tuulo, dabadeedna la gubo. Ma se fahmi jirin, xikmadda iyo fal-sadda ka danbaysa. Aniguna iskuma luri jirin in badan waayo waxa igala weynaa madadaaladda aan ka heli jiray oo ka xiiso badnaa.
Ma aan helin jawaab aan ku kaaftoomo ilaa aan safar ugu baxay magaaladda Jinja, oo 80km dhinac waqooyi-galbeed ka xigta Kambaala.
Jinja, waa magaalo-ganacsiyeedka labaad ee Yugaandha. Waxa ay ku taalla jidka weyn ee isku xidhiidhiya Kambaala iyo Mombassa. Waanna xudunta warshadlayda dalka.
La kulankaygii Soomaaligii Lumay!
Waa magaaladda Jinja oo waaggu soo baryayo.
Waa 7dii Luulyo 2013. Waaggu wuxuu iigu baryey Guriga Martida Baraka, ee magaaladda Jinja.
Aniga, magaaladdu waxa ay ila ahayd maadeys! Amma adigaa matalaya, oo Jilaagga ah, amma daawadde ayaad ka tahay,oo indhahaad maalaysaa.
Waan diyaargaroobay. Tunta ayaanan u ritay shandadii dharka ee aan sitay, waxa aan u jarmaaday dhanka suuqa, si aan quraac u raadsado. Qorraxdu markaas uun bay foolka la soo baxday, dadkuna wadada hareeraheeda ayey si teel-teel u lugaynayeen.
Waxa aan soo galay maqaaxi cunto, oo furan. Dabadeedna waxa aan ka dalbaday beed shiilan, muus iyo shaah caano leh. Aniga oo dalabkii sugaya, telefoonkayga gacantana isku madadaalinaya, ayaa si lama filaan ah waxa ii soo dul-istaagay nin aanan hore u arag! Waa nin caato ah, oo midabkiisu maariin yahay. Waxa uu gashanaa shaadh gacmo-gaab ah oo ka weyn, badhamadda sarrena u furan yihiin.
“Waxa aan filayaa in aad halkan ku cusub tahay?”ayuu cod gaaban igu weydiiyey.
“Haa !” ayaan ugu jawaabay, aniga oo la yaaban sida faduulnimada ah ee uu iila qabsaday.
Inta uu kursigii igu xigay soo jiitay, ayuu sheeko igu bilaabay.
“Anigu waxaan ku noolaa magaaaladda 50 sannadood. Shantii dawladood ee dalka soo maray, afar ka mid ah, waan u soo taagnaa.!” ayuu hadalkiisii ku ibo-furay.
“ Halkee ka timid?” ayuu igu soo celiyey, isaga oo af-Soomaali jajaban igula hadlaya.
“Hargeysa” ayaan ugu jawaab celiyey.
“Hudheelkan aniga leh!”
” Cuntaduna waa ku bilaash, mar haddaad Hargeysa ka timid!” ayuu si kaftan leh iigu sheegay.
Warsame Sawaxili [ma aha magaciisa saxda ah’e], wuxuu ila galay xasuuso hore, oo iga da’ weyna. Hargeysaddii beri samaad! Magaaladdii uu ku kacaamay, ee dooxu kala badhi jiray. Iyo weliba dhismayaashii koobnaa ee Ingiriisku lahaa.
Ganacsade, noloshiisa ku qanacsan buu eekaa. Wuxuu xidid la ahaa dadka ku abtirsada Boqortooyadda Busoga ee degga agagaarka Jinja. Sidoo kale, wuxuu ii sheegay in diinta Islaamka ka baxay oo uu qaatay diinta Kiristaanka.
Bar-bilawga Niilka Cad
“Durdur iyo xareeedeey,
Dhibic iyo darrruureey.
Ubax daranyo muuseey
Abwaan Cabdiqaadir Yamyam, markii uu heeskaas u tirinayey gabadhii qalbigiisa hanatay, waxa aad is odhanaysaa, tolow ma isku goob baad joogteen. Neecawada qabow ee ku ilawsiinaysa diifta safarka, dhirta garbaha isku haysta iyo tigaadda caggaaran ee dhulka lagu daadiyey. Waxa aad ku xiiso galinaya laxanka uu samaynayo qulqulka webiga Niil.
Bar-bilawga Webiga Niil- waa goobta dalxiisayaashu ka daawadaan webiga.
Indhahaygu waxa soo jiitay taallo loo dhisay Hoggaamiyihii Caanka ahaa ee Hindiya, Mahatma Gandhi, oo ku taal xeeligga webigga Niil.
“Waxa lagu daadiyey qayb ka mid ah dambaskii maydkii la gubay ee Gaandi!”ayuu Warsame iigu sharaxay, isaga oo farta iigu fiiqaya dhanka ay taalladu naga xigtay.
Wuxuu ii sheegay in Mahatma Gandhi dambaskiisii lagu filqiyey dunidda guudkeeda oo dhan, gaar ahaan webiyadda waaweyn, si xasuustiisu ugu nagaato qalbiyadda shucuubta caalamka.
JINJA: Taallada loo dhisay Hoggaamiyihii reer Hindiya, Mahamata Gandhi
Diinta Hinduusamka ayaa aaminsan in qofku ka abbuuran yahay is-biirsiga shan walxood: cirka, dhulka, hawadda, dabka iyo biyaha. Qofku geeriyoodaana waa in dib loogu celiyaa asalkiisa. Waayo wuxuu gelayaa nolol kale oo cusub, geerrida kadib.
Warsame wuxuu sheekadaas ii werinayaa, aniga iyo isaga oo wada saaran doon lagu dalxiiso, oo nala mushaaxaysa Har-weynta Victooriya. Waxa aan harta dhexdeeda ka arkayey biyo hoosta ka soo maaxanayey, una eekaa laag soo farruurantay, oo biyaha kala eryeysay. Waa bar-bilawga webiga ugu dheer dunida, Niil.
Bar-bilowga webiga ugu dheer dunida ee Niil
← Daa’uuska Afrika- Safarkaygii Dheeraa! Q6aad
Afrika ‘habaaran’ →